Galtee(LibreOffice Fakkasa qofaf)
LibreOffice Haalata Fakkuu kamshaa, xiyyaa sajootti aansee jiru cuqaasi Miidhama sajoo irraa Fakkaasuu. LibreOffice Toleessaa Mul'annoo - Kamshaa - Haalatafiladhu.
Wanta(oota) G-2 madii qabxii qinxaa filataman marsuu yookiin micciiri. Qabannoo moggee wanta kallattii marsuu fi barbaaddetti harkisi. Wanta micciirtu, qabannoo handhuuraa kallatti itti micciiruu barbaaddetti harkisi.
Tokkoon tokkoo islaayidii qabxii qinxaa qaba. Qabxii qinxaa gara handhuuraatti wantaatti siqsuun lama-cuqaasi. Dabalataanis qaphxii qinxaa haara argii irraatti harkisuu kan dandeessuu fi itti aansuudhaan wanticha cuqaasi.
Garee wanta G-3 hammatee yoo filatte, wanta G-3 qofatuu naanneeffama. Wanta 9-3 micciiru hin dandeessu. Iddoo isaa gara siiqqota kalatti Y fi X ti qabannoo handhuuraatiin harkisuun marsuu dandeessa.
Wanta(oota)filatamanii maddii sarara meelchuu ati islaayidiirratti iddoo barbaaddeetti harkistu meelcha. Qabannoo wanta(toota) gamaa gamana sarara meelchu harkisuuf. Qaabachisa sarara meelchuu jijjiiruuf, tokko isaa qabxii isadhumaa gara argama haaraatti harkisi.
Naannawa wanta G-3 keessaa
Wanta(oota)G-2 filatame gara wanta G-3tti kan jijjiiruu maddii sarara walqixaan marsuu dhaanii.
Boca wanta jijjiiramee jijjiiruuf, sarara walqixa gara argama haaraatti harkisi. Yaadachiisa sarara walqixaa jijjiiruuf dhuma qabxii tokko isaatti harkisi. Gara G-3 tti jijjiiruuf wanta cuqaasi.
Geengoo keessa kaa'i(abbuuroo)
Wanta filatamee maddii geengoowwane yaadaatti marsuun roga dogoggoraa kenna, ittaansuun akkaataa wanta tokko itti ilaalan ida'a. Qabannoo wanta filatamee faalleesuuf harkisi. Yoo wanti filatame dachaafama rog-addee yookin golboo Bezier ta'uu baate, wantichi osoo faallaa hin ta'in dura battalumatti dachaafamaatti jijjiirta.
Wanta filatame maddii geengowwan yaadatti marsuudhaan faallessa. Jeequudhaaf qabannoo wanta filatamee harkisi. Wanti filatame dachaafama rog-addee yoo ta'uu baate, battalumatti osoo hin faallessiin wanticha gara dachaafamaatti jijjiira.
Qabbannoo wanta filatamee boca isaa akka jijjiirtu gargaara. Wantichi filatame rog-addee dachaafama yoo ta'uu baate battalumatti osoo hin faallessin dura wanticha gara dachaafamaatti jijjiirta.
Kallattii garagaartoo iftoomaa jijjiiruuf qabannoo adii harkisi. Dheerina gargartoo jijjiiruuf qabannoo gurraacha harkisi. Kabala Halluu irraa gatii saxxiillaa isaanii jijjiiruuf copha halluuwwanii qabannoo dabalataanis harkiisi.
Kabala Halluu agarsiisuuf, Mul'anno - Kamshaa -Kabala Halluu fili.
Gargaartoo guutamu wanta filatamee ibsa. Ajajni kun kan argamu gargaartoo wanta filatamee Bal'ina - Dhangii keessaa yoo fayyadamte qofa. Kallattii gargaartoo yookiin dheerina gargaartoo harkisi. Dabalaanis kabala halluu irraa halluuwwan qabannoo irratti harkisuu ni dandeessa halluu gargaartoo qabxii dhumaa jijjiiruuf. Kabala halluu agarsiisuuf mul'annoo kamshaa - kabala Halluu filadhu.
Title is: Haalata